China HP Graphite Electrodes Ho an'ny mpanamboatra vy ary mpamatsy | Qifeng
Carbon Anode Block / sary an-tsokosoko Carbon Anode ...
Low Sulphur Calcined Pitch Petroleum Coke Specificat ...
Calcined Antracite Coking Coal Calcined Antracite
Sakan-tsarimihetsika fanoherana herinaratra, herinaratra tsara ...
Toerana niandohana: Hebei, Sina (Tanibe)
Anaran'ny marika: QF
Application: Steel fanaovana / vy mandrehitra
Length: 1600 ~ 2800mm
Fanoherana (μΩ.m): <6.2
Density miseho (g / cm³ ):> 1.67
Fanitarana hafanana (100-600℃) x 10-6 /℃: <2.0
Herin-tsaina (Mpa):> 10.5
ASH: 0,3% max
Karazan-tsofina: 3TPI / 4TPI / 4TPIL
Akora: Coke petrole
ambony: Taham-bidin'ny ambany
Color: Volondavenona mainty
savaivony: 300mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 650mm, 700mm
3000 Ton / taonina isam-bolana
Pallet hazo mahazatra na mifanaraka amin'ny fangatahan'ny mpanjifa.
Port: Seranan-tsambo Tianjin
(1) ny tombony azo amin'ny alàlan'ny electrode grafite dia ny fanodinana mora kokoa, ny tahan'ny fanesorana ireo milina avo lenta, ny fahaverezan'ny grafita dia kely, noho izany, ny mpanjifa milina mpamorona tarika vondrona sasany dia nanome ny electrode varahina fa tsy electrode grafit. Ankoatr'izay, ny sasany amin'ireo endrika manokana ny electrode dia tsy azo vita amin'ny varahina, fa mora kokoa ny mamolavola grafita, ary mavesatra ny elektroda varahina, tsy mety amin'ny fanodinana electrode lehibe, ireo antony ireo dia nahatonga ny fampiharana ny mpanjifa misy milina fitifirana taratra elektroda.
(2) mora kokoa ny manodina electrode electrite, ary mazava ho azy faingana noho ny electrode varahina ny hafainganam-pandehan'ilay sary, ohatra, ny processeur dia alain'ny fikosoham-bary, izay 2-3 heny haingana noho ny metaly hafa ary tsy mila fanodinana boky fanampiny, raha Ny elektroda varahina dia mila fitotoana tanana. Toy izany koa, raha mampiasa ivotoerana fanodinana grafite haingam-pandeha hanamboarana ny electrode ianao dia ho haingana sy mahomby kokoa ary tsy hisy olana amin'ny vovoka. Amin'ireto dingana ireto, ny fisafidianana ny fitaovana hamafin'ny mety sy Ny grafita dia afaka mampihena ny fitaovan'ny fitaovana sy ny fahasimban'ny elektroda varahina. Rehefa mampitaha ny fotoana ihainganana eo anelanelan'ny elektroda grafit sy ny elektroda varahina dia 67% haingana kokoa ny elektroda grafit noho ny electrode varahina. Amin'ny fametahana masinina amin'ny toe-java-misy ankapobeny, ny fotoana fanodinana miaraka amin'ny electrode grafit dia 58% haingana kokoa noho io amin'ny elektroda varahina, vokatr'izany dia mihena be ny fotoana fanodinana ary mihena ny vidin'ny famokarana.
(3) ny famolavolana electrode grafit dia hafa noho ny an'ny elektrode varahina nentim-paharazana. Betsaka ny orinasa maty ao amin'ny electrode varahina amin'ny fanodinana henjana sy ny lafiny famaranana no samy manana ny vola natokana ho azy, ary ny electrode electrite dia ampiasaina sahala amin'ny vola natokana, izay mampihena ny CAD / Ny fotoam-panodinana CAM sy ny milina, noho io antony io ihany, dia ampy hanatsarana tanteraka ny fahamendrehan'ny lava-borosy.
Previous: Carbon Rasier ho an'ny fandefasana, Cathode Block ary fitaovana elektrônika karbôna, GPC
Manaraka: Elektroda elektrika an-tserasera tsy tapaka
Hp 300mm Graphite Electrodes mpanamboatra
Hp Grade Graphite elektroda
Tselatra elektroda grafit
Elektroda elektrika an-tserasera tsy tapaka